တရုတ်၊ မီးဘေးဒဏ်ခံနိုင်သောသံမဏိ၊ လက်ဗွေကုဒ်သော့ခတ်ခြင်း၊ စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူအမျိုးမျိုး | Boda
သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဖြင့်ယနေ့လုံခြုံစိတ်ချရမှုသည်အရိုးရှင်းဆုံးသောခိုးယူမှုစနစ်မှသည်ခိုးယူမှု၊ မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ ခိုးယူမှု၊ မီးဘေးကာကွယ်မှု၊ , သေနတ်, စာရွက်စာတမ်းများ, ဒေတာ, etc
၎င်း၏အထူးလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပရိဘောဂနှင့်ခိုးယူမှုကြောင့်လုံခြုံစိတ်ချရမှုရွေးချယ်ခြင်းကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။ လုံခြုံမှုကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အောက်ပါအချက်များမှအခြေခံအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည် -
၁။ သံမဏိပြားအမျိုးအစားရွေးချယ်ခြင်း - သံမဏိပြား၏အထူ၊ ပစ္စည်းနှင့်မူလကိုခွဲခြားပါ။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်တူးဖော်ခြင်းနှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းကဲ့သို့သောအထူးကိရိယာများကိုအသုံးပြုသောအခါလုံခြုံစိတ်ချရသောပစ္စည်း၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေပါသည်။
2. ပုံဖော်ခြင်းနှင့်ဂဟေဆော်ခြင်း - ကက်ဘိနက်၏ကိုယ်ထည်ကိုတစ်ချိန်တည်းဖွဲ့စည်းထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ၊ ကက်ဘိနက်တံခါးနှင့်တံခါးဘောင်အကြားကွာဟမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန်နှင့်ခလုတ်သည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ကွာဟချက်ကြီးလွန်းလျှင် anti-prying လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းသွားလိမ့်မည်။ မီးဘေးကာကွယ်ရေးအတွက်ကြီးမားသောကွာဟချက်ကိုခွင့်မပြုပါ။
၃။ ရိုးရာဖွဲ့စည်းပုံ - ဤသည်လုံခြုံမှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက box ထဲမှာရှိနေလို့အသုံးပြုသူကမမြင်နိုင်ပေမယ့်နည်းပညာဖွင့်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကုန်သည်များအားအတွင်းပိုင်းရိုးရာဖွဲ့စည်းပုံတိကျမှုရှိ၊ မရှိနှင့်ဂီယာသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမရှိစစ်ဆေးရန်တံခါးမျက်နှာပြင်နောက်ဘက်အဖုံးကိုဖွင့်ရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သော့ခတ်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုလည်းစစ်ဆေးသင့်သည်။ သော့ခတ်မူလီ၏အချင်းကိုထူသင့်သည်။ ယခုလူကြိုက်များသောသော့ခတ်ပုံစံသည်ကောင်းသောအဖွင့်အကျိုးသက်ရောက်သည်။
4.Lock: ရိုးရာဖွဲ့စည်းပုံသည်မျက်နှာပြင်ဖြစ်လျှင်သော့ခတ်ခြင်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ သော့ခတ်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့မဟုတ်သော့ကိုတုပခြင်းသည်ခိုးယူမှုပပျောက်ရေးယန္တရား၏စိတ်နှလုံးကိုဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်တူသည်။ ရှုပ်ထွေးသောသော့များကပျက်စီးခြင်းနှင့်သော့ကူးခြင်းတို့ကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။
5. အရန်အစိတ်အပိုင်းများ: အပိုပစ္စည်းများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့အသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှသူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသေချာသင့်ပါတယ်။
6.Alarm လုပ်ဆောင်ချက် - အလိုအလျောက်အချက်ပေးစနစ်ရှိသည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်အလိုအလျောက်နှိုးစက် (ရွေ့လျားခြင်း၊ နှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်မှားယွင်းသောကုဒ်နံပါတ်သုံးခု) ကိုပေးနိုင်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ activation အခြေအနေများများလေလေကောင်းလေလေဖြစ်တယ်။ လက်ရှိတွင်လုံခြုံမှုများစွာတွင်အလိုအလျောက်နှိုးစက်မရှိသလောက်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်နှိုးစက်စတင်ရန်အခြေအနေအနည်းငယ်သာရှိသည်။ ဝယ်ယူသောအခါသင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးမြန်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
7. အကျင့်ပျက်ခြစားမှုတိုက်ဖျက်ရေး - ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကောင်းစွာကိုင်တွယ်ခြင်းမရှိပါက၎င်းသည်သေတ္တာ၏အသွင်အပြင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ လေးနက်သောဖြစ်ရပ်များတွင်၎င်းသည်လုပ်ငန်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ Anti-Theft Safe ၏အတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်ဆေးသုတ်သင့်သည်။ ပလပ်စတစ်ကိုပက်ဖြန်းသင့်သည်။ စက်မှုလုံခြုံမှု။
8. ပေါ်ထွက်လာခြင်း: ကြီးမားခြင်းနှင့်တစ်ထပ်တည်းကျမှုသည်သုံးစွဲသူ၏လုံခြုံမှုကိုနားလည်မှုမရှိတော့ပါ။ လူတွေကအဲဒါကိုအိမ်အလှဆင်တဲ့အနေနဲ့လုပ်နေတယ်။ ပထမ ဦး စွာမျက်နှာပြင်ချောခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်းရှိမရှိကိုလေ့လာပါ။ ဒုတိယအနေနှင့်အရောင်နှင့်ပုံသဏ္theirာန်သည်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိမရှိလေ့လာပါ၊ ၀ ယ်ယူရန်အမှန်တကယ်ရုံးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ပေါင်းစပ်ပါ။
9. အရွယ်အစား: သင့်ရဲ့အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအန္တရာယ်များ၏အရွယ်အစားကိုတိုင်းတာ။ အကယ်၍ ၎င်းကိုနံရံထောင့်နေရာတွင်ထားပါကအရွယ်အစားကိုထည့်တွက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကက်ဘိနက်ကဲ့သို့သောဖုံးကွယ်ထားသည့်နေရာတွင်ထားရန်လိုအပ်ပါကလုံခြုံမှုပမာဏ၏ ၅၀ စင်တီမီတာနှင့်အလေးချိန်သည် ၃၀ ကီလိုဂရမ်အတွင်းရှိသည်။ သတိပြုသင့်သည်မှာ ၅၀ စင်တီမီတာကျော်သောအမြင့်ဆုံးလုံခြုံမှုသည်အောက်ခြေဘီးများတပ်ဆင်ထားပြီးမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည်။ အခုတော့လုံခြုံမှု၏အရွယ်အစားနှင့်သတ်မှတ်ချက်များအများအပြားရှိပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အများဆုံးအရွယ်အစားသည် ၁၀၀ စင်တီမီတာထက်ပိုနိုင်သည်။ ဒါဟာအစစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန် ၁၅ ရက်ကြာသည်။
၁၀။ ဘက်ထရီ - အီလက်ထရောနစ်စကားဝှက်လုံခြုံရန်အတွက်။ ထည့်သွင်းထားသည့်ဘက်ထရီအပြင်အီလက်ထရောနစ်စကားဝှက်လုံခြုံမှုတွင်ယေဘုယျအားဖြင့်ပြင်ပအပိုဘက်ထရီအကွက်ရှိသည်။ ၀ ယ်သည့်အခါ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံမှုရှိမရှိကိုသင်အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည်။ BOSENDA အမှတ်တံဆိပ်၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအမှတ်တံဆိပ်သည်စွမ်းအင်ကိုပြသနိုင်ပြီး၎င်းတွင်အမှန်တကယ်လည်ပတ်မှုအတွက်အဆင်ပြေစေသည်။
BOSENDA သည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး / မီးဘေးဒဏ်ခံဘေးကင်းရေးသေတ္တာ / လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးနှင့်လုံခြုံစိတ်ချရသောအကွက်အပြည့်ပါ ၀ င်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါဖော်ပြချက်များအရအလေးချိန်သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များ၊ သော့ခတ်ခြင်း၊ လက်ဗွေသော့ခတ်ခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များ, သာမန်သံမဏိပြားမှစူပါ Hard သံမဏိပြားမှပစ္စည်း, ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်။ ဖောက်သည်များစောင့်ဆိုင်းရသောအချိန်ကိုရှောင်ရှားရန်, သောင်းချီယူနစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏လစဉ်ထုတ်လုပ်မှု, အစာရှောင်ခြင်းပေးပို့, ။ ထိရောက်မှုမြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုနှင့်အချိတ်အဆက်များအားလုံးကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်သည်။
ရှေ့သို့ လက်သည်းများကိုဝက်အူများနှင့်တိုးချဲ့ပါ၊ ပလပ်စတစ်တိုးချဲ့သည့်ဝက်အူ၊ ချဲ့ထားသော scew လက်သည်းချဲ့သည့်အပေါက်၊ cacable clips
နောက်တစ်ခု: ထောင့်ကြိတ်စက်၊ သက်ရောက်မှုလေ့ကျင့်ခန်း၊ သံတူ၊ လီ-ion လေ့ကျင့်ခန်း၊
ပိုက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, heavy duty ပလပ်စတစ်ပိုက်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, adj ...
ကြိတ်ဘီးဓါး, ဗဓေလသစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းဓါး, ste ...